Iindawo ezi-4 kwezi-5 zolwandle ezingcono kwihlabathi zise-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindawo ezi-4 kwezi-5 zolwandle ezingcono kwihlabathi zise-US
Iindaba zaseBrazil zokuQhekeza • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Novemba 18, 2021
Iindawo ezi-4 kwezi-5 zolwandle ezingcono kwihlabathi zise-US.
Uphononongo lujonge iilwandle ezili-100 kwihlabathi liphela kwaye lazibeka kwimiba efana nemozulu, ubushushu bolwandle, amaxabiso ehotele, inani leendawo zokutyela, kunye nexabiso lemithombo yeendaba elunxwemeni loluntu ukufumanisa ukuba zeziphi iilwandle ezizezona ndawo zokuchitha iholide.
Kanye nolwandle oluhle ngokwalo, ukujonga ngasemva ukusuka eCopacabana kukunika umbono wesinye sezona zixeko zibalaseleyo kwihlabathi phantsi kweliso elibukhali lomfanekiso oqingqiweyo kaKristu.
Inani leendawo zokutyela kunye nemivalo kufuphi nolwandle yi-11,153, uninzi lwalo naluphi na ulwandle kuluhlu.
Iilwandle ezine zase-US zenza ezinye iilwandle ezi-5 eziphezulu, kunye ne-Miami Beach ibeka olona lwandle lungcono kwiiholide e-US kunye nendawo yesibini jikelele.
Njengoko iilwandle zenza ezona ndawo zidumileyo zokuya ekhefini phakathi kwabakhenkethi base-US, iingcali zohambo ziveze ezona ndawo zokukhenketha ezingcono kakhulu emhlabeni.
Kwaye kuvela ukuba abaseMelika akufuneki bahambe umgama omde ukuya kwindawo enkulu yokuphumla elwandle, njengoko iilwandle ezine zase-US zibalwa kwezintlanu eziphezulu.
Iilwandle ezili-10 eziphezulu zeholide kwihlabathi jikelele
Uhlu Igama lolwandle I-Instagram Hashtags Inani leeNdawo zokutyela/iiBar Ixabiso eliphakathi leHotele ($) Ubushushu obuphakathi (Farenheight) Umyinge wemvula yonyaka (mm) I-Avareji yoBubushushu boLwandle (Farenheight) Amanqaku onke
1 ICopacabana, eRio de Janeiro 3,800,000 11,153 $112.34 74.5 1,252 73.6 6.97
2 Ulwandle lwaseMiami, eMiami 14,400,000 809 $226.05 75.9 1,113 80.6 6.80
3 Ulwandle lwaseVenice, LA 4,200,000 10,578 $215.78 63.7 357 63.5 6.54
4 ISouth Beach, eMiami 8,200,000 809 $226.05 75.9 1,113 80.6 6.16
5 Ulwandle lwaseSanta Monica, LA 440,000 10,578 $215.78 63.7 357 63.5 6.14
6 ENaama Bay, eSharm El-Sheikh 44,500 305 $128.78 77.2 10 78.3 6.02
7 I-Pink Sand Beach, eAntigua 40,300 3 $221.94 97.2 899 81.7 5.93
8 Ulwandle lwaseBarceloneta, eBarcelona 94,600 9,681 $183.58 59.9 614 65.5 5.89
9 Ulwandle lwaseMui Ne, eVietnam 36,700 247 $54.12 79.7 954 81.5 5.84
10 ICayo Coco, eCuba 145,000
Ulwandle lwaseCopacabana eBrazil ibizwa ngokuba lolona lwandle lubalaseleyo lweholide kuphando. Kanye nolwandle oluhle ngokwalo, ukujonga ngasemva ukusuka eCopacabana kukunika umbono wesinye sezona zixeko zibalaseleyo kwihlabathi phantsi kweliso elibukhali lomfanekiso oqingqiweyo kaKristu. Inani leendawo zokutyela kunye nemivalo kufutshane nolwandle yi-11,153, uninzi lwalo naluphi na ulwandle kuluhlu. Ngaphezulu koku, ICopacabana amanqaku kakuhle phakathi kwezinye izinto ezibandakanya iihotele, ubushushu bomoya, kunye nobushushu bamanzi.
Iilwandle ezine zase-US zenza ezinye iilwandle eziphezulu ezi-5, nge Miami Beach ukubeka olona lwandle lungcono kwiholide e-US kunye nendawo yesibini jikelele. Olu lwandle ngokuqinisekileyo lolunye lwabaphembeleli kunye nabasebenzisi bemithombo yeendaba zentlalo, njengoko longezelele izigidi ezili-14.4 zee-hashtag kwi-Instagram. Oku kuthetha ukuba ngowona mkhulu Instagrammed elunxwemeni, inee-hashtag ezingaphezulu kwe-13.7 yezigidi ngaphezu kolwandle oluqhelekileyo. Olunye unxweme lwaseMiami lukwindawo yesine, iSouth Beach, efumana amanqaku aphezulu ngenxa yobushushu bomoya obuyi-75.9℉, kwaye ishushu ngakumbi elwandle ngobushushu obuphakathi bamanzi obuyi-80.6℉.
IVenice Beach ibekwe kwindawo yesithathu xa iyonke, enelona nani liphezulu lesibini leendawo zokutyela (10,578), kunye neyesine uninzi lwe-hashtag ye-Instagram (i-4.2 yezigidi). Njengoko ikwindawo yaseLos Angeles, iSanta Monica Beach inamanqaku afanayo kakhulu neVenice Beach, esona sizathu sibangela ukuba ibekwe phantsi (kwindawo yesi-5) kungenxa ye-3.76 yezigidi ezimbalwa zeehashtag ze-Instagram.